-အရည်အသွေးမြင့် HD
နည်ွးပညာကိုအသွိုးပြုထွားတ့ အတ က် သင့်ဖိုန်ွးထ ကကမ္ဘာကြွးက အမှန်တကယ်အသက်ဝင်နေသက့ သို့  ခ စွားရမှာဖြစ်ပါသည်။
Tranquilize your eyes
-မျက်နှာပြင်(5)လက်မအရ ယ်အစွားရှ ပြွး Higher capacity touchscreen ကိုတပ်ဆင်ပွေးထွားပြွး ရိုပ်ထ က်အရည်အသွေးပို င်ွးကတော့ 1280*720 Pixels ရှ တ့ အတ က် အရည်အသွေးမြင့် HD Videoတေ ကို ကြည့်ရှုခ စွားနို င်ပါသည်။
- 1.2 GHZ Quadcore Processor ဖြစ်ပြွး Andriod Version 5.1 Lollipot ပါဝင်ပြွးနောက်ဆွိုးပေါ် အဆင့်မြင့်နည်ွးပညာဖြင့်ထောက်ပ့ ပွေးထွားပါသည်။သင့်ကို ပို ပြွးတည်ကြည်ခန့်ညွားလှပစေမှာဖြစ် ပါသည်။
Keep alive your illustrious moments
Click တစ်ချက်နှ ပ်ရို ဖြင့် ပို ရ ပ်မျွားကိုဖမ်ွးယ နို င်ပြွးကျောဘက် Camera 5MP ပါဝင်တ့ အပြင် Auto Focusကို လည်ွးလိုပ်ဆောင်ပွေးမှာဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရ့ တန်ဖွိုးရှ တ့အချ န်တေ အွားလွိုးကို မှတ်တမ်ွးတင်ပွေးထွားနို င်ပါသည်။
သင့်ရ့ ကို ယ်ပို င်ဖျော်ဖြေမှုအနေဖြင့် သ ချင်ွးမျွားကို တစ်နေကိုန်နွားဆင်နို င်ပါသည်။ Play Back နည်ွးပညာကို အသွိုးပြုထွားတ့ အတ က် ကြည့်လက်စ Video တေ နွားထောင်လက်စသ ချင်ွးတေ ကို Auto မှတ်သွားပွေးထွားပြွး ရောက်လက်စနေရာကနေ ပြန်လည်စတင်နို င်ပါသည်။
ဖိုန်ွးအတ င်ွးမှတ်ဥာဏ်ပမာဏမှာ RAM 1 GB နှင့် ROM 8 GBရှ တ့ အပြင် 32 GBအထ မြင့်တင် အသွိုးပြုနို င်ပါသည်။ သင့်အချက်အလက်တေ ကို တစ်ခိုမကျန်မှတ်သွားပွေးထွားနို င်ပါသည်။ 2000 mAh Battery ကို အသွိုးပြုထွားတ့ အတ က် အချ န်ကြာမြင့်စာဖိုန်ွးပြောခြင်ွး၊ ဂ မ်ွးဆော့ခြင်ွး၊ အင်တာနက် အသွိုးပြု ခြင်ွးတို့ ကို သင့်စ တ်တို င်ွးကျဆောင်ရ က်နို င်ပါသည်။
Rate the Intex Aqua Life III:
Keep me posted on the latest news about Intex aqua Life III Smartphone
Please send me the latest news, announcements, offers and other updates about Intex aqua Life III . You may opt out of receiving emails at any time.
aqua Life III Specifications Support